Fandikana sy fandikana mba hanatsarana ny fampisehoana marketing amin'ny vidéo | Martech Zone
Fandikana sy fandikana hanatsarana ny fampisehoana marketing amin'ny horonan-tsary
Zoma, Jolay 3, 2020 Zoma, Jolay 3, 2020 Douglas Karr
Ny fitadiavana orinasa mpandika teny avo lenta dia mety tsy ho zavatra voalohany eritreretinao rehefa mamaritra ny làlana tsara indrindra hanatsarana ny fanentanana amin'ny varotra horonantsary, saingy angamba tokony ho izany. Ny serivisy fandefasana horonantsary dia afaka manampy anao hampitombo ny fijerinao sy ny fifandraisan'ny mpijery amin'ny horonan-tsarinao. Zava-dehibe ny mahatadidy fa mila fandikan-teny marina ianao ary ianao jereo daholo ny asa hahazoana antoka fa fandikan-teny kalitao izy io.
Ny fandikana kalitao avo lenta an'ireo horonan-tsary dia afaka manampy amin'ny fampitomboana ny fahitana ny fampielezana horonantsarinao amin'ny alàlan'ny fanampiana anao hanome ny laharana ireo horonan-tsary voadikao amin'ny toerana ambony kokoa eo amin'ny pejy valin'ny motera fikarohana, tsy amin'ny Google ihany fa na amin'ny fikarohana anatiny Youtube aza. Raha ny marina, ny serivisy fandikan-teny kalitao dia afaka manampy amin'ny fampitomboana tsy ny fampielezankevitrao marketing fa ny fanatrehanao iraisam-pirenena amin'ny lafiny rehetra amin'ny varotra an-tserasera.
Youtube no tranokala faharoa malaza indrindra amin'ny internet ary mijanona kely ao ambadiky ny Google fotsiny. Samy nitombo be ny lazan'ny Youtube sy ny asany vokatry ny areti-mandringana Covid-19. Araka ny Mieritrereta amin'ny Google, mitodika any amin'ny Youtube ny olona amin'ny isan'ny fitomboan'ny isan'ny fampahalalana izay tsy noheverin'ny maro akory. Anisan'ireo karazana horonan-tsary malaza indrindra mankafy ny fijerin'ny mpijery amin'izao fotoana izao ny resipeo, horonantsary DIY (na Ataovy ny tenanao), ny fomba hampihenana ny adin-tsaina, ny fianarana an-tserasera sy ny horonan-tsarimihetsika an-trano.
Ny tsirairay amin'ireo hevitra momba ny varotra horonantsary ireo dia mety ho tsara ho an'ny tsenan'ny influencer horonantsary, fa rehefa ampiarahana amin'ny fampahalalana fanampiny sy ny heriny ary ny fahombiazan'ny fampielezan-kevitry ny marketing amin'ny Youtube mahomby, ireo dia afaka manampy amin'ny fanatsarana ny valin'ny fampielezana horonantsary video.
Ny fampielezan-kevitry ny marketing amin'ny Youtube dia efa ela no iray amin'ireo antony manosika ny olona hamantatra amin'ny Internet hoe inona no hovidiny na tsia. Misy lisitra feno momba ny antontan'isa momba ny varotra horonantsary hita ao amin'ny Blog Hubspot mampiharihary fironana mivelatra sy mahasoa amin'ny marketing video, ao anatin'izany:
80% amin'ireo mpivarotra no mampiasa fananana hita amin'ny marketing ara-tsosialy. Ny horonantsary (63%), irery ihany koa dia nihoatra ny famahanam-bolongana (60%) amin'ny fampiasana ho fananana ara-barotra amin'ny media sosialy.
Maninona no mandeha ny fandikana video sy ny fandikana an-tsary
Raha jerena ny toetoetran'ny fitaovana sy programa fanovana horonantsary maoderina marobe, maka fanahy ny maka kaody mafy fotsiny ny dikanteny ho lasa horonan-tsary ary manadino izany. Na dia vahaolana tsotra ho an'ny fanovana horonan-tsary aza izany, tsy ao anatin'ireo vahaolana tsara indrindra ho an'ny fampielezan-kevitra amin'ny varotra horonantsary. Nahoana?
Ny ampahatelon'ny hetsika an-tserasera dia lany amin'ny fijerena horonantsary ary ny 85% amin'ny horonan-tsary Facebook dia zahana tsy misy feo na dia matetika aza ny olona amin'ny finday dia mijery horonantsary betsaka kokoa nefa tsy misy feo.
Ireo rakitra misy dikanteny roa sy ny lohateny mikatona tsy dia misy fijery firy sy fifaneraserana. Lahatsary misy famaritana kapila mihidy na fisie srt aseho amin'ny fananana fomba fijery, fizarana, tiana ary fanehoan-kevitra mitombo.
Ireo srt Ireo rakitra avy amin'ny fandefasana horonantsary dia alain'ireo motera fikarohana. Izany dia mampitombo ny isan'ny teny lakile izay hijoroan'ny horonan-tsarinao tsara, indrindra raha manana horonan-tsary marobe ianao amin'ny fampielezana horonan-tsary. Io koa dia mampitombo ny mety hisehoan'ny horonan-tsarinao eo amin'ny pejy voalohany amin'ny pejin'ny valin'ny motera fikarohana sy amin'ireo horonantsary atolotra ao amin'ny Youtube.
Ny serivisy fandikan-dahatsary dia manampy anao hampitombo ny isan'ireo teny lakile izay nalahatry ny horonan-tsarinao amin'ny fiteny maro araka izay itiavanao azy. Ankehitriny, ny mpihaino midadasika kokoa sy malalaka dia afaka mankafy ilay horonan-tsary, tsy amin'ny fitenin-drazanao ihany, fa miaraka amin'izay koa, mampitombo ny isan'ny teny lakile hitondrana ny horonan-tsary, hampitombo ny fahitana sy ny fifandraisan'ny horonan-tsarinao fampielezan-kevitra amin'ny marketing.
Fampahalalana: mpiara-miasa aminay i Rev.
Tags: srtfandikan-tenyvideo marketingfandikana videofandikana videoserivisy fandikana videoYouTube
Antony 5 antony ilan'ny orinasanao tetikady marketing amin'ny horonan-tsary